Global Voices teny Malagasy » Haïti, Kôngô (R.D.K.), sy ny pôlitikan’ny kere · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Avrily 2008 9:06 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Brea Nandika Tomavana
Sokajy: Karaiba, Haiti, R.D. Kongo, Fampandrosoana, Fanoherana, Politika, Sakafo, Voina
Ny fidangan'ny fisondrotry ny vidin-tsakafo  dia efa nipoiran'ny pitik'afo izay nandrehitra rotaka tany Haïti , sy Egypta ary Mozambika , tamin'ity volana ity toy ny fihasarotan'ny raharaha dia tsy hamela fotsiny ny kere hianjady amin'ireo osa indrindra amam-tapitrisany fa hisedra koa ny fahosana sy tsy fahampian'ny traikefan'ireo fitondram-panjakana any amin'ireo tany mahantra menrana izao tontolo izao.
Natifnatal izay mpiblaogy vehivavy Haïtiana dia nanapariaka ny hatezerany , tamin'ny lahatsoratra izay mahavaky fo tokoa, raha nijery ireo tranga avy any amin'ny arivony kilometatra, avy any Abu Dhabi izay onenany izy, ny fiheverany ny tenany dia toy ny sesitany antsitram-pò. “Rehefa mitrandraka ny hanoanana ho fitaovam-pandresena ireo mpanao pôlitika” [quand les politiciens se servent la faim pour marquer des points].
“Nandritra ny herinandro vitsy lasa izay dia niverina ho amin'ny matoam-pejy indray i Haïti. Na manao akory elanelan-tany manasaraka anao aminy dia tratr'ireo vaovao izay manenjika anao ihany ianao, ozokozonin'ireo sary, manakenda anao ny fahasahiranan-tsaina, ary farany dia mirehitra noho ny fahatezerana ianao. Misafoaka tokoa mantsy ianao, raha mamaky ny hakelezan'izay firenenao rehefa taterin'ireo gazety : andian'olo-mahantra tsy misy mpiahy izay mandroba, sy mamaky ireo tranombarotra vitsy izay mbola misokatra anivon'ny firenena izay efa nitsahatra ela tsy nihodina intsony, mandoro toha-dàlana, mitora-bato ny tranon'ny filoham-pirenena. Misafoaka ianao satria sarotra ny mamoka ny valinteny izay takian'ny fanontanian'ireo vahiny izay mifanena aminao, sady mba very hevitra koa manoloana izao raharaha izao. Moa ve mila atomboka amin'ny taona 1492 ny fanazavana, ny nahitana io nosy io “voalohany” indrindra, ny fanandevozana, ny famirapiratana ara-toekarenan'ity perla fahinin'ny vondronosy Antilles ity, ny tolona hoan'ny fahaleovantena, ny momba an'i Toussaint Louverture  [maherifò sady ngezalahin'ny tolom-panafahana ireo andevo Haïtiana] ? Sa ve mila tanisaina ny fitontogan'ny andavan'androntsika hatramin'ny taona 1804, ny fanjanahantany, ny fitondrana jadona, ny fanaovana vono-moka, ny kobak'am-bava izay notafiana demôkrasia nanditra ny fitondran'ny filoha Aristide, dia avy eo mitanisa ireo fakana an-keriny, ireo fanonganam-panjakana, ny fahantrana, ny maha-fadiranòvana, sy ny famoizam-pò izay sedraintsika isan'andro vaky izao. Satria ireo izay tsy mahalala dia afaka mametraka fotsiny ny kajikajy tsotsotra kere + fahantrana + fisondrotry ny vidin'entana = rotaka + fionganan'ny Praiministra + herisetra, sy mihevitra fa ny fampitomboana ny fanampiana ara-tsakafo dia tokony ho ampy hampihenana ny kere.”
Any amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô, Musengeshi Katata no manapariaka ao amin'ny Forum Realisance , ny lahatsoratra nampitondrainy ny lohateny hoe “Tany Haïti androany. Fa hanerana an'izao tontolo izao rahampitso” [Aujourd´hui Haïti, demain toute la périphérie], raha mandinika ny toe-draharaha izay niseho tany Haïti sy Egypta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/04/23/875/
 fidangan'ny fisondrotry ny vidin-tsakafo: https://www.globalvoicesonline.org/specialcoverage/global-food-crisis-2008/
 nandrehitra rotaka tany Haïti: http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-haiti5apr05,1,5805472.story
 nanapariaka ny hatezerany: http://natifnatal.blogspot.com/2008/04/quand-les-politiciens-se-servent-la.html
 Forum Realisance: http://realisance.afrikblog.com/archives/2008/04/10/8772512.html